Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA - XOOLAHA DALKA SOOMAALIYA. QEYBTA 13-AAD - iftineducation.com
Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA – XOOLAHA DALKA SOOMAALIYA. QEYBTA 13-AAD
aadan21 / December 15, 2011
Dalkeena sida la wada ogsoon yahay, wuxuu hodan ku yahay xoolaha! Dadka soomaaliyeed boqolkiiba in konton ka badan waxa hawl u ah dhaqashada xoolaha! Abaartii sanadadii 1974-1975 dhacday ka hor, xoolaha dalkeena waxa lagu qiyaasay dhawr iyo labaatan milyan oo neef.
Inkasta oo tiro ahaan ay ku kale badan yihiin, hadana xooluhu waxay ku baahsan yihiin, qaybaha dalka oo dhan.! Lo’du waxay ugu badan tahay gobolada webiyada ay maraan ee Hiiraan, Shabeelaha dhexe, Shabeelaha hoose, iyo Jubada hoose. Waxay kale oo Lo’du ku badan tahay Goboladu waqooyi galbeed! Arigu wuxuu ku badan yahay Gobolada Togdheer, Nugaal, Sanaag, Mudug iyo Galguduud! Geeluna wuxuu aad u joogaa gobolada Togdheer, Nugaal, Galguduud, Bay, Bakool, Gedo, iyo Hiiraan!
Xooluhu waa laf dhabarka dhaqaalaha dalkeena.
Si kastaba ha ahaatee xooluhu waa laf dhabarta dhaqaalaha dalkeena dheefta xoolaha ee cadka, caanaha iyo subaguna waa nafaqada ugu door roon ee dadku ku noolyahay. Isla mar ahaantii xooluhu waxay ganacsiga dibadda ee dakla kaga jiraan kaalinta kowaad.
Sidaas darteed dawladdii kacaanka waxay ku dadaashay sidii loo hagaajin lahaa sabada iyo deegaanka xooluhu ku dhaqan yihiin waxana guul laga gaadhay horumarinta daaqa, biyaha iyo daaweyntooda!
Meelaha ugu xoolaha badan dalkeena?
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 5-aad
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 6-aad